Indawo ebanzi ye-1BR yoMgangatho oPhezulu eKarawang
Kecamatan Ciampel, Jawa Barat, Indonesia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPricilia
UPricilia unezimvo eziyi-109 zezinye iindawo.
I-Batiqa Apartments Karawang yi-10.4km ukusuka e-Karawang Central Plaza kwaye inikezela ngendawo yokuhlala eququzelelwe ngoKhuseleko lweeyure ezingama-24, i-CCTV kwiNdawo yoLuntu, i-Elevator, iZiko lokuQinisekisa, iPhuma lokuQubha.
Ngaphezu koko, izibonelelo zegumbi ezifana nebhedi enye, iKumkani (180x200) egqunywe ngelinen esemgangathweni yehotele, i-air conditioner (AC), umabonwakude, ukufikelela kwi-Wi-Fi yasimahla kwigumbi, izinto zangasese, kunye nekhitshi.
Ifulethi elinegumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, elinye, igumbi lokuhlala elihonjiswe ngesitayile sangoku. Ukusuka kule ndawo yokuhlala engama-44, ungangqina imbonakalo entle yesiXeko.
Igumbi ngalinye lale yunithi yezindlu lixhotyiswe nge-air conditioner (AC). Le yunithi yezindlu inesitayile sanamhlanje isifudumezi samanzi sinikezelwe kwigumbi lokuhlambela. Ukusuka emgangathweni, ungakonwabela ukuJonga okumangalisayo kweSixeko. Igumbi lokuhlambela eliphambili libonelela ngebhafu.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-109 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
-Hutan Kertas unokufikelelwa ngemizuzu emi-4 ngemoto (1.3 km)
-Imizuzu engama-26 ukuqhuba ukuya ePalm Spring Golf (13.9 km)
I-Karawang Central Plaza yimizuzu engama-27 ngemoto (10.4 km)
*Ixesha lomgama luqikelelo kuphela phantsi kwemeko eqhelekileyo. Nceda uqaphele ukuba ukugcwala kweKarawang kuhlala kungalindelekanga.
Umbuki zindwendwe ngu- Pricilia